Fetim-pirenena 2020 :: Foana tanteraka ny arendrina sy ny afomanga • AoRaha
Sambany, amin’ity taona 2020, no tsy hisy ny arendrina, izay isan’ny endrika manamarika ny Fetim-pirenena isaky ny 26 jona, eto Madagasikara. Nofoanana avokoa ny hetsika mety hitarika fitangorongoronan’olona, manomboka ny alakamisy 25 jona hatramin’ny 26 jona 2020 hankalazana ny tsingerin-taona niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena noho ny fiatrehana ny ady amin’ny tsimokaretina « Covid-19 ».
« Tsy hisy ny afomanga. Tsy azo atao koa ny mivoaka ny trano mitondra arendrina, tahaka ny isan-taona », hoy ny jeneraly Randrianatoandro Guerson, lehiben’ny komity misahana ny fikarakarana ny fanamarihana ny Fetim-pirenena, omaly.
Foana miaraka amin’ireo fepetra eo ambony ireo ny lanonam-panjakana arahina fiaraha-misakafo, eny Iavoloha, na fampisehoana andampihazo maimaim-poana hataona mpanakanto (podium), mahazatra ny tanàna maro manerana ny Nosy, hatramin’izay. Ferana tsy hihoatra ny dimampolo kosa ny isan’ireo manampahefana hanatrika ny matso manoloana ny Lapan’ny tanàna, etsy Analakely, ny andron’ny 26 jona.
« Ny Filohan’ny Repoblika sy ireo filohana andrimpanjakana miisa efatra ary ireo minisitra miahy ny Fiarovampirenena no hanatrika ny matso. Miampy ny minisitry ny Fahasalamana sy ny minisitry ny Filaminam-bahoaka fotsiny ireo mpikambana ao anatin’ny governemanta voaasa ho etsy Analakely. Hihena tsy toy ny mahazatra koa ireo mpitandro filaminana hanatanteraka izany », araka ny fanampim-panazavana.
« Hasiana ihany ny matso satria tsy azo lalovana fotsiny izany tsingerin-taona manantantara izany. Ao anatin’ny fahanginana no niheverana hanamarihana ny Fetim-pirenena noho ny fisorohana ny fiparitahan’ny tsimokaretina, raha ny tokony ho izy », hoy ihany ny jeneraly Randrianatoandro Guerson.
Hiezaka ny hampifaly ny Malagasy rehetra tamin’ny alalan’ny fandefasana fandaharana manokana momba ny tantaran’i Madagasikara sy kilalao isan-karazany mifandraika amin’ny Fetimpirenena ao amin’ireo haino aman-jerim-pirenena ny komity. Toy izany koa ny matso eny Analakely.
Nanao fanambaràna teny Ampahibe niantso ny Malagasy rehetra hanangan-tsaina isan-tokantrano, omaly, ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, minisitry ny Fiarovam-pirenena. « Ho mariky ny fiandrianam-pirenena no anton’izany », hoy izy.
Hira fiderana :: Mikarakara ny fifaninanana ny Sky Sound Team
Fanovozam-pahalalana :: Hahazo ny Rakibolana ireo mpianatra eto Analamanga